सुम्निमा ग्रामीणको पच्चीस वर्ष : हिजोदेखि आजसम्म
By vijayafm on	 March 26, 2019 Uncategorized, कोरोना अपडेट, देश, फोटो फिचर, राजनीति, स्थानीय, स्थानीय तह
गैँडाकोट । गैँडाकोट २ मा रहेको सुम्निमा ग्रामीण बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको स्थापना २०५० सालमा स्थापना भएको हो । चैत्र १३ गते सुम्निमा ग्रामीण साकोसले २५ औँ वर्ष पुरा गर्दैछ । यस साकोसले सप्ताहब्यापी रुपमा विभिन्न कार्यक्रमका साज रजत महोत्सब मनाएको छ । विपन्न वर्गको आर्थिक समुन्नतीका लागि स्थापीत यस सहकारीले हिजोदेखि आजसम्म के कस्ता काम गर्दै आइरहेको छ । संस्था कुन अवस्थामा आइपुगेको छ ? भावि योजनाहरु के के छन् ? संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष र वर्तमान अध्यक्षका विचार प्रस्तुत छ ।
संस्था स्थापना गर्नुभनेको एउटा परिकल्पनालाई साकाररुप दिने कार्य हो । नेपालको सहकारी आन्दोलन २०१३ साल देखि प्रारम्भ भएतापनि २०४६ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको सफलता पछि २०४८ सालमा सहकारी ऐन निर्माण भए पश्चात सहकारी संस्था स्थापना हुने क्रम बढ्दै गएको पाईन्छ । तत्कालीन समयमा सुम्निमा साकोस स्थापना गर्दा प्रवर्धकिय संस्था सुम्निमा युथ क्लवको अध्यक्षको भुमिकामा स्वयम् आफुनै रहेको हुँदा संस्थाका सम्पूर्ण सदस्य एवम् शुभ चिन्तक ज्यूहरुबाट संस्था स्थापनामा धेरै ठुलो सहयोग मिलेको थियो । सहकारी ऐन बनेपनि सो बारे सम्पूर्ण संचालक एवम् शेयर सदस्यहरुमा जानकारी भई सकेको अवस्था थिएन । समुदायमा वचत गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास भैसकेको थिएन दिनको १ रुपैयाको दरले मासिक रु ३० बाट जम्मा हुने पँजी सानो हुने भएकोले सदस्यहरुको आर्थिक समस्या समाधान हुन सक्दैन भन्ने सदस्यहरुले ठान्दथे ।
आफ्नो लागि बचत भन्दा ऋण पाइन्छ भनेर सहकारीमा सदस्य बन्ने वातावरण थियो । संस्थामा पैसाको अभाव हुने गर्दथ्योे । कार्यालय एवम् कर्मचारी व्यवस्था गर्न सकिएको थिएन । संस्थामा आवश्यक निति नियम बनाउन सहकारी सम्बन्धित ज्ञानको अभाव थियो । सदस्यहरुको घर दैलोमा गई रसिद काटेर बचत रजिष्टरमा चढाउनु पर्दथ्यो । यसरी घर दैलो सेवा दिएको भएता पनि संस्थाको स्थायीत्वमा सदस्यहरुमा विश्वासीलो बातावरण बनाउन ज्यादै संघर्ष गर्नु परेको थियो । हाल सम्म पनि स्ांस्थाको आफ्नो नाममा जग्गा भएपनिे भवन नभएकोले स्थापनाको समयदेखि प्रर्वधकिय सस्थाको भवनबाट नै सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
आज भन्दा २५ वर्ष अघि २०५० चैत्र १३ गते स्थापना भएको सुम्निमा साकोस स्थापना हँदाका बखत गैडाकोटमा जिविकोपार्जनको मुख्य पेशा भनेको खेतिपाति र पशुपालन थियो । यहाँका बासिन्दाले आफ्नो समाजिक एवम् वित्तिय आवश्यकता पुरा गर्न हुने खाने वर्ग साहुँ र महार्जनलसंग चर्को व्याज दरको ऋणमा निर्भर रहनु पर्दथ्यो । तत्कालिन समयमा गैडाकोटमा विकू बचतले गैडाकोट ५, ६, ७ र ८ मा समुदायमा सहकारी प्रति सकारात्मक सन्देश र सदस्यहरुलाई सहयोग पुर्याएको परिवेश थियो । यता गैडाकोट १ र २ मा सहकारी संस्था स्थापना भै नसकेकोे अवस्थामा समुदायका मानिसको आर्थिक परिवर्तनका निमित्त सुम्निमा साकोसको स्थापना भयो ।
देशमा सहकारी संस्था विच एकिकरणको बहश (अभियान ) शुरु भईसकेको परिप्रेक्षमा कावासोतिका उद्दयमि व्यवसायी एवम् समाजसेवि साथिहरुको सकृयतामा २०५३ सालमा स्थापना भएको ग्रामीण साकोस जस्कोे तत्कालिन (निर्वाचन क्षेत्र नं १ र २) हालको नवलपुर जिल्ला कार्य क्षेत्र ओगटेको ग्रामिण बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था एकिकरण गरि सुम्निमा ग्रामीण साकोसको स्थापना भयो । सो एकीकरण गर्ने समयअवधिमा पुन म आफै दोश्रो कार्यकालको अध्यक्ष भएको हुँदा दुवै संस्थाका परकिल्पनाकार अभिपरुेरक संस्थापकहरुलाई उच्च सम्मानका साथ स्मरण गर्न चाहन्छु ।
सर्वप्रथम त सुम्निमा ग्रामीण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको २५ औँ बसन्त पार गरेको अवसरमा सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद एवं सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु । मलाइ तत्कालिन सुम्निमा साकोसको वि.सं. २०५१ साल मंसिर २४ गते देखि निरन्तर वि.सं. २०६२ फागुन २० सम्म संस्थाको तीन कार्यकाल अध्यक्षता लिने गहन जिम्मेदारी सम्पूर्ण शेयर धनीबाट प्राप्त भएको थियो । संस्था भर्खर सहकारी ऐन २०४८ अनुसार कानुनी मान्यता प्राप्त गरी समुदायमा आफ्नो पहिचान र उद्देश्य अनुरुप उपस्थितिका लागि अगाडी बढ्दै थियो । बचत तथा ऋणका बारेमा समुदाय जिज्ञासु देखिन्थ्यो । मैले जिम्मेवारी वहन गर्दा व्यवस्थापनको पाटो सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो । कार्यालय व्यवस्थापनका साथमा छरिएर रहेको रेकर्डलाई चुस्त पार्ने, सञ्चालक समिति, उपसमितिका पदाधिकारीहरु र सदस्यहरुलाई आआफ्नो जिम्मेवारीप्रति जागरुक बनाउने, सहकारी संस्था एउटा वित्तिय संस्था भित्रका प्रचलित आचरणबाट सञ्चालन गर्न सकिएन भने समुदायको कहिल्यै पनि विश्वास जित्न सकिदैन भन्ने कुरामा म सदैव प्रतिवद्ध थिएँ । यो विषयलाइ मध्य नजर गर्दै शेयर सदस्यहरु थप गर्ने, शेयर पुँजी बढाउने, नियमित बचत गराउने, समुदायले खोजेको आर्थिक सहायतालाई प्रभावकारी बनाउने तर्फ सुम्निमाले सदैव ध्यान दियो ।
तत्कालिन समयमा समुदाय बचत तथा ऋणको सन्दर्भमा आज जस्तो जानकार थिएनन । एउटा शेयर सदस्य थप गर्न पटकौँ पटक बचतबारे जाकारी दिने र निजहरुको समस्या बुझ्ने तर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित थियो । हामीहरु बचत तथा ऋणको अग्रज संस्था विकूलाई मान्दछौँ । विकूका संस्थापकहरु तत्कालिन समयका हाम्रा स्रोत व्यक्तित्वहरु हुनुहुन्थ्यो । मेरो कार्यकालमा सुम्निमालाई जिल्ला राष्टिय अन्तर्राष्टिय रुपमा चिनाउने कार्यहरु उपलबधी मूलक मानिन्छन् । मैले अध्यक्षता प्राप्त गर्दा संस्थाको वित्तिय अवस्था करिब १ लाख वरपर थियो । त्यस समय उक्त रकम ठूलै मानिन्थ्यो । संस्थाको वित्तिय आकार सानो थियो तर हाम्रा सञ्चालक समितिले अत्यन्त सुजबुझका साथै वित्तिय गतिविधिलाई प्राथमिकतामा राखेर साइज वृद्धि गरी, शेयर थप, विभिन्न नीतिहरुको निर्माण गरेर अघि बढाएका थियौँ ।
तत्कालिन समयमा एसियाली ऋण महासंघले नेपालका केही बचत तथा ऋण सहकारीहरुलाई छनोट गरी विभिन्न किसिमका तालिम गरेको थियो । उक्त छनौटमा सुम्निमा साकोसले पनि अवसर प्राप्त गरेको थियो । हाम्रो कार्यकालमा ५ हजार ऋण दिँदाठूलो गुन सम्झेर सदस्यहरु उत्साहित हुनुहुन्थ्यो । सरकारी बैँकहरुमा सानो रकम लिन ठूला झन्झटीला कागजी पक्रियाबाट गुज्रने समस्या थियो । सहकारी विकल्पको रुपमा उदाउँदै थियो । यस समयमा यस संस्थाको स्थापना र विकासले समुदायलाई ठूलो राहत प्राप्त गरेको थियो । सदस्यहरु बचत गर्ने र बचत रकम दुई हजार, पाँचहजार, दश हजार भएपछि फिर्ता लिने, सोहीलाई धरौटी र जमानी राखि ऋण लिन प्रचलनले प्रत्येक घरघरमा सहकारीको बारेमा जयजयकार मनाएको अवस्था थियो । ब्ऋऋग् को इन्डिकुवा कार्यक्रम अन्तर्गत बंगलादेश, भारत लगायतका देशहरुमा संस्थाहरु अध्ययन अवलोकन गर्ने अवसर प्राप्त भयो । यसलाई ठूलो उपलब्धीको रुपमा लिइन्छ । मेरो कार्यकालमा आर्थिक सुशासनलाई प्रमुख प्राथमिकताका साथ राखेर थुप्रै कार्यक्रमहरु अघि बढाइएको थियो । संस्थाका कुनैपनि वित्तिय पक्ष, पद्धति र पक्रिया भित्र रहेर व्यवस्थापनबाटै सञ्चालन गर्नु र गराउनु आर्थिक अनुसासनको पूर्वाधार हो ।
साविक गँैडाकोट गाउँ विकाश समितिको कार्य अन्तरगतवार्ड न १ र २ का युवायुवतीहरुको ३३ जनाको सक्रियतामा प्रारम्भिक भेला बसेको थियो । भेलाले २०५० साल चैत्र १३ गते गैंडाकोट कार्यक्षेत्र तोकी ससाना पूँजीलाई एकीकृत गरी लगानी योग्य बनाउने उद्देश्य राखी एउटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था आवश्यक महसुस गरीएको थियो । उक्त भेलामा सहभागी एक सदस्य भएको नाताले सँस्थाको नाम छनौट गर्ने काम निकै चुनौतीपूर्ण नै थियो । तत्कालिन सुम्निमा युथ क्लवका पदाधिकारी नागरिक समाज, शिक्षा क्षेत्रका अग्रजहरुको राय सुझाबबाट नेपालका प्रजातान्त्रिक योद्धा पूर्व प्रधानमन्त्री एबम साहित्यकार महामानव स्व विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको एउटा उपन्यासको महिला पात्र महिला उनको नाम सुम्निमा अनि ग्रामिण क्षेत्र र शहरी जीवनको फरक चित्रण गरिएको छ । ग्रामिण क्षेत्रका जनताको जीवनस्तरलाई कसरी स्वाबलम्बी बनाई सहज बनाउन सकिन्छ भन्ने परिकल्पनालाई केही हदसम्म भएपनि सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ सुम्निमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था नामाकरण गरी निरन्तर सेवा रहेको छ । यसैगरी २०७२ सालमा कावासोती नगरपालिकामा रहेको ग्रामिण बहुउदेसिय सहकारी सस्था लि. संग एकिकरण गरी सुम्निमा ग्रामिण बचत तथा ऋण सहकारी सस्था लि. को रुपमा सेबढी,वा दिएको सर्बविधितै छ ।
साबिक सुम्निमा बचत तथा ऋण सहकारी सस्था लि.को मिति २०६२÷११÷२० मा बसेको पाँचौ अधिबेशनबाट म र मेरो नेतृत्वमा संचालकको जिम्मेवारी सुम्पियो । जुन अवस्थामा संस्थाको न्यून पुँजी रहेको, व्यवस्थापन खर्च, बढी बचत रकम नियमिततामा, ऋण असुलीमा तिव्रता दिनुपर्ने अवस्थामा रहेको, शेयर धनी लाई सस्ंथा नाफामा छ भनेर पाकेको ब्याज आम्दानी बाँधेको अवस्था जस्ता समस्याबाट संस्था गुज्रिएको थियो । त्यस बेलामा हामीले नेतृत्व सम्हालेका थियौँ । संस्थाको समस्यालाई प्राथमिकता गरी क्रमसः अगाडी बढ्नुको विकल्प थिएन । पहिलो समस्या ऋण असुली र बचत संकलनलाई अगाडी बढायौ घर दैलो कार्यक्रम शुरु गयौ । यो अभियानले ८० प्रतिसत भन्दा बढी सफलता प्राप्त गरेपछि उच्च मनोवलका साथ अगाडी बढ्नु प्रेरण मिलेको थियो । हामी बचतकर्ताको मन जित्न सफल भएका थियौ जसबाट सस्थामा शेयर बिक्रि सदस्यता वृद्धि हँुदै सस्था स्वाबलम्वन तर्फ अगाडि बढिसकेको थियो । पहिलो वर्षनै असुली आम्दानीवाट शेयर सदस्यलाई लाभांस वितरण गर्न सफल भएका थियौ । संस्थागत सुधारतर्फ केन्द्रित गरि संस्थामा कम्प्युटर खरिद, कर्मचारी प्रशासन नियमावली निर्माण, कर्मचारीलाई संचयकोष जम्मा गर्ने व्यवस्था, शेयर धनीहरुलाई आकास्मिक रहात कोषको स्थापना, विभिन्न स्थानीय नीति निर्माण गर्ने कार्य सम्पादन गरेका थियौँ । संस्थाको कार्यलाई पारर्दशी जनमुखि बनाउनका लागी संस्थाले पहिलो पटक सामाजिक परिक्षण कार्य सम्पन्न गरको थियो । सोहि वर्षदेखि गैंडाकोट–२ शिलाान्यास स्थित महेन्द्र स्मारक आधारभूत विद्यालयमा अध्यनरत गरिव जेहेन्दार छात्र छात्रालाई छात्रवृत्ति कार्यको सुरुवात गरियो । समाजिक उत्तरदायित्व अन्र्तगत आँखा शिविर लगााायत सेयर सदस्यहरुलाई विभिन्न तालिम गोष्ठी लगायत शेयर सदस्यह लाई सचेतना कार्यक्रम संचालन गरि संस्थाका आर्थिक तथा सामाजिक प्रतिष्ठा उच्च राख्दै शेयर सदस्यहरुलाई प्रभारकारी सेवा प्रदान गर्ने एउटा असल वित्तिय संस्थाको रुपमा चिनाउन हामी सफल भएका थियौँ ।
सुम्निमा ग्रामीण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड एक प्रारम्भीक सहकारी संस्था हो । यसको स्थापना तत्कालिन सुम्निमा युथ क्लब र बर्तमान सुम्निमा विकास परिषद्को अगुवाईमा ३३ जनाको भेलबाट भएको थियो । संस्था विशेष गरी दलित जनजाति, आदिबासी, गरिब तथा बिपन्न र महिला बर्गहरुमा लक्षित भएको हुँदा नि कार्यहको आर्थिक समुन्नतीका लागि संस्थाले व्यक्तिगत, सामुहिक रुपबाट सदस्यता बृद्धि गरिएको थियो । त्यस्तै गरी संस्थाले बनाएका सदस्यहरुलाई नीजको आर्थिक विकासमा उन्नती गरी जीवन स्तर माथि उठाउनका लागि शीपमूलक, स्वरोजगारमूलक र आयआर्जन मूलक कार्यक्रमहरु झोल साबुन बनाउने तालिम, अगरबत्ती बनाउने तालिम जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । तालिम पश्चात् उक्त व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने शेयर सदस्यहरुलाई आवश्यक पर्ने ऋण समेत परिचालन गरिएको थियो । त्यस्तै गरी गैँडाकोट १ र २ भित्र रहेका प्रत्येक घरधुरी र गरिब बिपन्न दलितका घरमा घरदैलो कार्यक्रम गरी शेयर सदस्यता समेत बृद्धि गरिएको थियो । त्यसैले तत्कालिन समयमा समुदायको आर्थिक उन्नती तथा समुन्नती हुने किसिमका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुँदा समुदाय भित्र रहेका तथा यस संस्थाका शेयरहरुको जीवन स्तरमा क्रमश बृद्धि हुँदै गइरहेको देख्न सकिन्छ ।
त्यसै गरी मेरो कार्यकालमा माथि उल्लेखित कार्यको साथ साथै नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय संघ लि. र नेपाल सरकारले जारी गरेका सहकारीका नीति नियम अनुसार संस्थालाई आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा दर्ता गरी प्यान नम्बर लिइएको थियो । जुन हालसम्मपनि जारी रहेको र सञ्चालन भइरहेकोछ । त्यसको साथ साथै सहकारी संस्थाको लागि आवश्यक पर्ने सदस्यता शिक्षा कार्यक्रम र नवलपरासी जिल्ला भित्र सञ्चालन गरिएको प्रशिक्षण मध्येको उत्कृष्ट तालिम “सहकारी शिक्षा प्रशिक्षक कार्यक्रम” २०६६ पौषमामा सञ्चालन गरिएको थियो । साथै उक्त समयमा उत्कृष्ट सहकारी संस्थाहरुको अवलोक भ्रमण, हाजिरीजवाफ प्रतियोगिता, अन्तरमावि वक्तृत्वकला प्रतियोगित जस्ता विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरी सदस्यहरुको सर्वाङिगण विकासमा सहयोग पुराउने कार्यको थालनी भएको थियो । जसले गर्दा संस्थाको चिनारी सहकारी समन्वय मञ्च गैँडाकोट, नवलपरासी जिल्ला बचत संघ लिमिटेड नवलपरासी, जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेड नवलपरासी, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघलिमिटेड ( नेफ्स्कून), राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लिमिटेड आदि संघसंस्थाहरुमा भएको पाउन सकिन्छ ।
ंअन्त्यमा यस संस्थाको स्थापनादेखि वर्तमानसम्म सकरात्मक रुपबाट ल्याउनु हुने सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वज्यूहरुप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै रजत महोत्सबको पावन अवसरमा संस्थाको उत्तरोत्तर पप्रगतिको कामना समेत गर्दछु ।
आज भन्दा २५ वर्ष अगाडि तत्कालिन गैँडाकोट गाविसमा गैँडाकोटको वाड नं. ८ मा विकूले बचत अभियान सञ्चालन गरेर जनमानसमा भविष्यका लागि बचत गर्नुपर्दछ भन्ने अभियानको थालनी गरिसकेको थियो । गँैडाकोट १ र २ पूर्वी भागमा बचत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा सुम्निमाले केही परिवर्तन गरकेो छ । गैँडाकोट १ को केही भाग र वडा नं. २ को नदि किनार भागमा गरिब बिपन्न समुदायको बस्ती थियो । साथै मध्यम परिवारको समुदायमा बचत कार्यक्रमको मार्फत आर्थिक समुन्नतीमा विशेष भूमिका सुम्निमा ग्रामीण साकोसले खेलेको छ । बचत गरेर उक्त बचतलाई व्यवसाय, आयमूलक क्षेत्रमा लगानी गरी समुदायको आर्थिक क्षेत्रमा सुधार ल्याउनका लागि विभिन्न शिर्षकमा संस्थाले ऋण लगानी गरेको छ । संस्थाले आयमूलक र सामाजिक ऋण गरी दुई क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्दछ । पहिलो प्राथमिकता आयमूलक ऋणको लागि रहने गर्छ । जस्तै पशुपालन, कुखुरापालन, व्यापार व्यवसाय, कृषि उद्योग आदिमा लगानी गर्ने गर्छ । उक्त लगानीको सही सदुपयोग भएको छ या छैन भन्ने कुराको अनुगमन एवं प्राविधिक सरसल्लाह र सहयोग पनि संस्थाले प्रदान गर्ने गरेको छ । ऋण छनोटको प्राथमिकता आयमूलक ऋणमा रहने गर्दछ । जसको प्रतिफल स्वरुप गँैडाकोट एवं कावासोती सेवा केन्द्रबाट ऋण लिएर आर्थिक समुन्नती गर्ने धेरै शेयर सदस्यहरु हुनुहुन्छ ।
वि.सं. २०६७ बैशाख ३० गते देखि २०७१ पौष २६ गतेसम्म संस्थाको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सहित अध्यक्ष बन्ने सौभाग्य प्राप्त भयो । संस्थाको विकासका लागि स्थायित्वका लागि भवन र जग्गाको सोच गर्नुपर्छ भन्ने विचार आयो । उक्त विषय संस्थाका पूर्व अध्यक्ष एवं अग्रजहरुमा तथा कार्यसमितिमा छलफल गरेर सबैको सहयोगमा सर्बप्रथम गैँडाकोट वाड नं. २ हालको कार्यालय अगाडि आफ्नै स्वामित्वमा जग्गा खरिद गर्यौँ । संस्थाको कार्यालय व्यवस्थापन गरी सर्व सुलभ र व्यवस्थित रुपमा सेवा प्रवाह गर्ने कार्यमा विशेष ध्यान पु¥याएको पाइन्छ । साथै संस्थाको स्थायीत्वका लागि शेयर पुँजी वृद्धि गर्नुपर्दछ भन्ने कुरालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर शेयर वृद्धि अभियान सञ्चालन भएको थियो । नौ लाख शेयर पुँजी सहित कार्यकाल सम्हालेको थिएँ । अभियानको सुत्रपात गरेकै कारण मेरो कार्यकाल देखि अभियानले सार्थकता पायो । आज १ करोड २३ लाख बराबरको शेयर पुँजी वृद्धि पु¥याउन संस्था सफल भएको छ । संस्थालाई मुखले होइन विधि र नियम संगतमा संस्थालाई सञ्चालन गर्ने कार्यको थालनी भयो । बचत संकलन नियमित, ऋण लगानी र असुली नियममा रहेर व्यवस्थित तवरबाट हुनुपर्दछ भन्ने मान्यतालाई अंगीकार गर्दै नीतिगत सुधार गर्दै पुराना भाका नाघेका ऋण असुली अभियानले पनि कार्यकालमा सफलता पायो ।
सुम्निमा ग्रामीण बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आज २५ औँ वर्षमा पुग्न सफल भएकोमा सर्वप्रथम सबै शेयर सदस्यज्यूहरुलाई बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु । यस अवसरमा संस्थाले ७ दिने कार्यक्रमका साथ भव्य रुपमा रजत महोत्सव मनाइरहेको छ ।
सुम्निमा ग्रामीण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था शुसरु देखिनै एउटा सानो र सुन्दर सहकारी संस्था रहि आएको छ । विशेषगरी सहकारीमा मूल्य मान्यतालाई अवलम्बन गर्दै सहकारी सिद्धान्तमा चल्ने एउटा विशेष प्रकारको संस्थाहो , सुम्निमा ग्रामीण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था । सुम्निमाको भावि कार्य योजनाको बारेमा चर्चा गर्दा खासगरी यसलाई दुई खण्डमा राखेर हेर्ने गरिएको छ । प्रथमत ः पहिला एकीकरण अघिको र एकीकरण पछिको सुम्निमा ग्रामीण । सुम्निमा ग्रामीणको रुपमा २०७२ चैत्रमा एकीकरण पश्चात् सुम्निमाको कार्यशैली, नीति, व्यवहार फरक हुन थालेका छ । खासगरी यसको सेवा पहिला सिमित कार्यक्षेत्रसंग भित्र रहेकोमा अबका कार्यक्रमहर गैँडाकोटलाई मात्र नभई कावासोती क्षेत्रलाई पनि समेट्ने गरी लक्षित गरिएको छ । त्रिवेणी सुस्ता पूर्वका नवलपरासीको पुरै बेल्टलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाएको यस सुम्निमा साकोसको कृयाकलाप व्यापक परिवेशमा तयार भइरहेको छ । भावि कार्ययोजनाको रुपमा भन्नुपर्दा संस्थाको मुख्य सोच भन्नुपर्दा निम्न बुँदाहरुमा उल्लेख गर्न चाहन्छु ।
सेवा केन्द्र विस्तार योजना – संस्थाले निकै छोटो समयमा कावासोतीमा १४० जना शेयर सदस्य सहित लिएको सेवा केन्द्रमा हाल ७ सय ६३ शेयर सदस्य भैसकेका छन् । आगामी दिनमा चोरमाार र दुम्किीबाससम्म थप सेवा केन्द्र विस्तार गर्नेछ ।
शेयर वृद्धि योजना – हाल संस्थाले चालु वर्ष लक्ष्य भन्दा बढी शेयर बृद्धि गरिसकेका छौँ र आगामी वर्षको लक्ष्य १ करोड ५० लाख रहेकोमा सो लक्ष्य भन्दा धेरै बढी अर्थात २ करोड शेयर पुँजी गराउन हामी समर्थ हुनेछौँ ।
दोस्रो त्रिवर्षिय व्यवासायिक योजना तर्जुमा – संस्थाले तयार गरेको पहिलो व्यवसायिक योजना ल्याउने छ । संस्थालाई हाल उपलब्ध नयाँ सफ्टवेयर लगायत, कम्प्युटरहरु प्रविधिको प्रयोगबाट थप सेवा दिदै आइएको छ । हिजो भन्दा धेरै फरक छ । सुम्निमा अब अझै थप कार्यक्रम बन्ने छन् । मोबाइल बैँङ्कीङ सुरु गरिसकेका छौँ । शेयर सदस्यहरुको खातामा के कति रकम छ । मोबाइलबाट हेर्न सकिने व्यवस्था मिलाइ सकिएको छ । अब एटिएम सम्म पुग्ने हाम्रो सोच रहेको छ । सेवाग्राही सेयर सदस्यहरुको सेवा नै हाम्रो लक्ष्य हो । शेयर सदस्यहरुलाई समयकाल अनुसारका सेवा प्रदान गर्न हामी सक्षम बन्ने छौँ ।
अधिक शेयर बोनस ः यसका अतिरिक्त शेयर बोनसमा हाल १५ प्रतिशत प्रदान गरिएको छ । अझ बढी गराउन प्रयासरत रहेका छौँ ।
ऋणका ब्याज कम र बचतमा ब्याज बृद्धि गर्नेछौँ । यसैगरी गत वर्षको नवौँ अधिवेशनबाट हाम्रो टिम निर्वाचित भए पश्चात तत्काल ब्याजदरमा सुधार गरी ऋणमा १ प्रतिशत कम गरी बचतमा पनि ब्याज बृद्धि गर्यौँ । यसलाई अझै कम गर्दै मार्जिन घटाउँदै लैजाने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ । अन्ततः हाम्रो उद्देश्य हाम्रो सेवाव सदस्यहरुको वित्तिय समस्याको समाधान भन्ने नाराका साथ अघि बढिरहेको छ । धन्यवाद ।